#Ciidamo gadoodsan oo la wareegay Dhuusamareeb iyo Isgaarsiinta oo hawada laga saaray - Get Latest News From Horn of Africa
#Ciidamo gadoodsan oo la wareegay Dhuusamareeb iyo Isgaarsiinta oo hawada laga saaray
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in Isgaarsiinta Magaalada Hawada laga saaray.
Arrinta ayaa ka dambeysay kadib markii Ciidamo gadoodsan oo ka tirsan Booliska Galmudug ay la wareegeen Saldhiga Magaalada Dhuusamareeb.
Amar kasoo baxay Maamulka Galmudug ayaa hawada looga saaray Isgaarsiinta Magaalada Dhuusamareeb ayadoo aan la ogeen sababta ka dambeysa, marka laga reebo Ciidamada gadoodsan ay la wareegeen Saldhiga Magaalada.
Ciidamadan gadoodsan ee ka tirsan Booliska Galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la’aan muddo bilo ah, waxayna ku dhaqaaqeen tallaabo ay kula wareegeen waddooyinka laga galo saldhigga Booliska Magaalada Dhuusamareeb, waxaana bilwoday dadaal loogu jiro xalinta dhibaatada ay tabanayaan ciidamada.
Gadoodka Ciidamada ayaa ka dambeysay markii Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo kormeeray Xarumaha Ciidamada ee Dhuusamareeb, tasoo la sheegay in xaalada magaalada ay badashay Ciidamada gadoodsan oo xiray wadooyinka qaar ee Magaalada.
Dad ku sugan Dhuusamareeb oo Internetka lagu helay ayaa sheegey iney dhibaato ku qabaan lacagta Taleefonada ku jirta oo aysa wax ku iibsan karin, maadaama aysa shaqeynayn, waxayna intaasi ku dareen in dhamaan deegaanada Galmudug laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga oo mar hore ay ugu dambeysay.
Dhawaan madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in wax dhaqaalo ah aysan ka helin Dowlada dhaxe islamarkaan xaalada ku suganyahay maamulka.